Otu esi eme nke ọma n'ọrụ ▷ ➡️ Chọpụta Online ▷ ➡️
Otu esi arụkwu ọrụ na ọrụ
4 Mingụ Nkeji
Otu esi arụkwu ọrụ na ọrụ. N'ụzọ bụ isi na-arụpụta ihe bụ inwe ike iwepụtakwu ihe site na obere ego enwere ike. Dịka ọmụmaatụ, igwe na-emepụta karama 10 kwa elekere na-arụpụta ihe karịa nke na-emepụta otu ọnụ ọgụgụ karama ma na-eji okpukpu abụọ eme ihe.
Ezigbo ọkachamara kwesịrị ịchọ ụzọ ọhụrụ iji na-arụpụtakwu ihe. E kwuwerị, nke a bụ njirimara nke ụlọ ọrụ ji kpọrọ ihe nke ukwuu: ndị ọrụ na-arụpụta ihe na-emepụta uru karịa.
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere mmasị na otú e si na-arụpụta ihe na-arụ ọrụ, si Discover.online Anyị ejirila ndụmọdụ ụfọdụ mee akụkọ a iji nyere gị aka ị nweta oge gị kacha mma.
1 Otu esi arụpụta ihe na-arụ ọrụ: ndụmọdụ bara uru
1.1 1. Zere ime ọtụtụ ihe n'otu oge
1.2 2. Mụta ịsị "mba"
1.3 3. Nyefee ọrụ
1.4 4. Egbula oge ihe omume ụlọ
1.5 5. Debe ebe ọrụ gị ahaziri ahazi
1.6 6. Kwadebe izu gị tupu oge eruo
1.7 7. Tọọ ihe mgbaru ọsọ kwa ụbọchị iji zute
1.8 8. Chọpụta ma kpochapụ isi iyi ọ bụla nke ndọpụ uche
1.9 9. Were obere ezumike n'ehihie
1.10 10. Akpọrọla gị ọrụ n’ụlọ
Otu esi arụpụta ihe na-arụ ọrụ: ndụmọdụ bara uru
Otu esi arụpụta ihe na ọrụ: ndụmọdụ
Iji bulie arụpụtaghị ihe n'ọrụ, enwere ụfọdụ omume kacha mma ị nwere ike ịmalite. N'ezie, ị ga-ahapụrịrị ụfọdụ akụkọ ifo dị ka ịbụ "multitasking" na oge ọrụ na-enweghị ezumike. Ihe nzuzo na-arụpụta ihe dabere karịa na atụmatụ na imepụta ihe mgbe a bịara n'ịrụ ọrụ gị karịa ịrụsi ọrụ ike. Nọgide na-agụ:
1. Zere ime ọtụtụ ihe n'otu oge
Ọ bụ mmejọ ikwere na ịrụ ọtụtụ ọrụ n'otu oge ga-enyere gị aka ịbawanye nrụpụta gị. N'ezie, ị gaghị enwe ike ịrụ ọrụ nke ọma na usoro a. Ị kwụsịrị ilekwasị anya, na-emehie ọtụtụ ihe, ọ na-ewekwa ogologo oge iji gbanwee site n'otu ọrụ gaa na nke ọzọ. Ya mere, anyị na-akwado ka ị gbalịa ime otu ọrụ n'otu oge.
2. Mụta ịsị "mba"
Ị maara mgbe ihe ndị a na-achọ ka na-abịakwute na tebụl gị wee kwenye na-atụ anya ime ihe niile? Otú ahụ ka ọ dị. Omume a na-emebi oke nrụpụta gị. Mụta ịsị "mba" ụfọdụ ndị, gụnyere onye isi gị, na anwala ime ihe karịrị i nwere ike ime.
3. Nyefee ọrụ
Ndụmọdụ a banyere otu esi arụpụta ihe na ọrụ nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ihe anyị kwurula na mbụ. Kama ịgbalị ime ihe niile n'onwe gị, nyefere ya ruo ókè o kwere mee.
Ndụmọdụ a, n'agbanyeghị, kwa na-enyere aka ịbawanye mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ n'ozuzu ya. N’ihi ya, onye ọ bụla ga-eme ihe ọ ma otú ọ ga-esi eme nke ọma!
4. Egbula oge ihe omume ụlọ
Zere igbugharị oge n'ihe omume ma emechaa. Gbalịa ịrụ ọrụ gị ozugbo enwere ike. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezere ime ihe niile na nkeji ikpeazụ, nke nwere ike imetụta àgwà nnyefe. Cheta okwu ochie nke na-adịghị apụ apụ n'ụdị: "Ahapụla maka echi ihe ị ga - eme taa".
5. Debe ebe ọrụ gị ahaziri ahazi
Debe ebe ọrụ gị ahaziri ahaziri
Nhazi bụ nne nke nrụpụta. Mgbe a haziri ebe ọrụ gị nke ọma na ihe dị n'ebe ha kwesịrị ekwesị, ị nwere ike ịhụ ohere gị nke ọma ma zere ịla n'iyi na akwụkwọ na-enweghị isi.
N'eziokwu, akpaaka usoro site n'enyemaka nke online ngwa na ngwaọrụ Ịwepụ akwụkwọ ma ọ bụ nchekwa na tebụl gị dịkwa mkpa ka ị na-arụpụtakwu ihe.
6. Kwadebe izu gị tupu oge eruo
A na-egbukarị oge dị oké ọnụ ahịa mgbe ị rutere ọrụ n'amaghị ihe ị ga-eme n'ụbọchị ahụ. N'iburu nke a n'uche, gbalịa ịhazi izu gị tupu oge eruo, na-etinye oge gị niile, nnyefe ma ọ bụ ọrụ gị n'ime atụmatụ gị.
7. Tọọ ihe mgbaru ọsọ kwa ụbọchị iji zute
Kwa ụbọchị na-eme yaNyocha a nke ebumnuche niile ịchọrọ iji nweta ụbọchị ahụ. Nke a bụ ụzọ ị ga-esi nọrọ na-ahazi wee rụchaa ọrụ kacha ngwa ngwa, na-ahapụghị ya maka oge ọzọ.
8. Chọpụta ma kpochapụ isi iyi ọ bụla nke ndọpụ uche
Ọ dị oke mkpa maka nrụpụta gị ịmara otu esi eme ya chọpụta ebe ndọpụ uche gị wee kpochapụ ha n'enweghị obi ebere. Na netwọk mmekọrịta n'oge awa ọrụ bụ ezigbo ihe atụ nke ihe ndọpụ uche na ị kwesịrị ikpochapụ. Ma o nwekwara ike ịbụ na e nwere onye ọrụ gị na-arụ ọrụ na na ọ na-adọpụ uche gị n'ihe ndị na-abụghị ọrụ metụtara. Ya mere, anyị na-akwado ka ị zere ịgwa ya okwu n'oge awa ọrụ.
9. Were obere ezumike n'ehihie
Ịnọgide na-awa 8 kwa ụbọchị raara onwe ya nye n'ụzọ zuru ezu maka ọrụ gị abụghị ka akwadoro dịka i chere. N'ezie, ezigbo bụ iji obere oge ezumike nke 5 ruo 10 nkeji kwa awa 2 iji kuku ume miri emi, ṅụọ ntakịrị mmiri, gbatịa ahụ gị, ma ọ bụ nwee soda.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, nkeji 5 ahụ ga-eme nnukwu mgbanwe na mmepụta gị kwa ụbọchị.
10. Akpọrọla gị ọrụ n’ụlọ
Ejila ọrụ laa
Iji kwụsị ndepụta ndụmọdụ ndị a maka otu ị ga-esi na-arụ ọrụ nke ọma, anyị na-akwado na, n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-eburu ọrụ gị n'ụlọ. Ụlọ gị bụ ụlọ nsọ gị nke ị ga-eji kwụsị ọrụ, zuru ike na fanye maka ụbọchị na-esote.
Anyị na-atụ anya ndụmọdụ ndị a ka esi arụpụta ihe n'ọrụ abarala gị uru. Site na Discover.online Anyị na-arịọ gị ka itinye ha n'ọrụ wee hụ nsonaazụ ya. Ruo oge ọzọ!.
Otu esi etolite charisma
Otu esi achịkwa nchegbu ndammana
Otu esi enwetaghachi enyi gị mebiri emebi
Nri Ịmụta LOSELA IHE IKU IKU | EBERE ỌRỌ Bible OZI Olee otú Dios Iche iche Ebumnuche Amaokwu Chọọchị Katọlik Akụkọ mgbe ochie Iwu Usoro mgbakọ na mwepụ Nrọ m Ekpere Popular Okpukpe Sacraments Santos Otu edemede Nrọ Tebụl Tarot Whatsapp